Macluumaadka Shirkadda - Jiangsu Aolong tiknoolajiyad cusub oo wax soo saar Co., Ltd.
Jiangsu Aolong horumarinta tiknoolajiyada cusub ee wax soo saarka Co., Ltd. waa shirkad xirfadlayaal ah oo loogu talagalay R & D iyo codsi dabaqa yujingshi ee gudaha. Shirkaddu inta badan waxay diiradda saareysaa dabaqa "Aolong" ee yujingshi.
Aolong waa nooc aad u firfircoon oo hal abuur leh, lehna cagaar, ilaalinta deegaanka, kaarboon hooseysa, keydinta tamarta sida fikradda astaanta, sanado badan ka dib tijaabo iyo cilmi baaris iyo horumarinta xubnaha kooxda. Dabaqa 'Jade crystal' ayaa dhashay! Gogosha taxanaha ah ee Yujingshi waxay leedahay tayada alwaax dabiici ah oo qaali ah, nolol aad u dheer oo adeeg dheer ah, hanti jireed aad u xoog badan, biyo celin iyo olol celin, caariyaysi anti iyo antiite, iwm! Laga soo bilaabo qaabeynta wax soo saarka iyo horumarka, wax soo saarka, rakibaadda, hagaajinta boostada iyo dhinacyada kale, Aolong waxay macaamiisha siisaa adeeg hal-joogsi ah.
Wax soo saarkayaga waxaa loo dhoofiyaa in ka badan toban dal oo ku yaal Yurub, Waqooyiga Ameerika, Koonfur-bari Aasiya iyo wixii la mid ah, oo waxay iskaashi la yeeshaan shirkadaha heerka-koowaad ee guryaha iyo naqshadeeyayaasha gudaha iyo dibaddaba. Iyada oo la adeegsanayo xoogga wadista hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda iyo dammaanadda heerarka caalamiga ah, waxaan sii wadi doonnaa inaan u adeegno macaamiisha gudaha iyo dibaddaba, waxaanna si daacadnimo leh ugu casuumi doonnaa aqoonyahanno ka socda dhammaan qaybaha nolosha inay iskaashi yeeshaan oo ay horumar wada sameeyaan.
Waxyaabaha Cusub ee Wadajira
Jiangsu Aolong Waxyaabaha Cusub ee Teknolojiyada Horumarinta Co., Ltd.
Warshad ama shirkad ganacsi?
a: Waxaan leenahay warshad noo gaar ah.
Biyuhu ma yihiin?
： HAA, 100% biyuhu ma galaan.
Shaybaarkaaga ma la heli karaa?
a ： Muunado ayaa lagu heli karaa bilaash. Waxaad ka dooran kartaa saamigeena, ama waxaad samayn kartaa shaybaarro sida aad u baahan tahay, laakiin waxaad u baahan tahay inaad bixiso khidmadda degdegga ah.
Ma ku bixin kartaa naqshadaha wax lagu raaco ee macaamiisha looga baahan yahay?
ah: Dabcan. Waxaan u daabacan karnaa sanduuqyada sida shuruudahaaga
Miyaad kartaa OEM / ODM?
a: Haa, alaabtayada waxaa lagu sameyn karaa si waafaqsan shuruudahaaga.
a: Waxay kuxirantahay amarkaaga, laakiin badanaa waxay ahaan doontaa 15-30 maalmood marka la helo debaajiga.
Ka waran shuruudaha lacag bixintaada?
a: Muddada lacag bixintayadu waa T / T, 30% deebaaji ahaan, dheelitir ahaan T / T ama L / C ka hor rarka ..
ah: FOB, CFR, CIF, EXW
Ahaanshaha xalka ugu sareeya ee warshadeena
taxanaheena xalka ayaa la tijaabiyey oo naga guuleystey shahaadooyin khibrad maamul.